KULMIYE Party » Wacdarihiii Taageerayaasha KULMIYE ee Degmooyinka M/Haybe iyo Sallaxley Ka Dhigeen Maalinta Labaad ee Kaltanka Ololaha Axsaabta Wacdarihiii Taageerayaasha KULMIYE ee Degmooyinka M/Haybe iyo Sallaxley Ka Dhigeen Maalinta Labaad ee Kaltanka Ololaha Axsaabta – KULMIYE Party
Wacdarihiii Taageerayaasha KULMIYE ee Degmooyinka M/Haybe iyo Sallaxley Ka Dhigeen Maalinta Labaad ee Kaltanka Ololaha Axsaabta
HomeWacdarihiii Taageerayaasha KULMIYE ee Degmooyinka M/Haybe iyo Sallaxley Ka Dhigeen Maalinta Labaad ee Kaltanka Ololaha Axsaabta
Sallaxley(Warbaahinta Xisbiga KULMIYE)-Taageerayaasha xisbiga KULMIYE oo ay hormood u yihiin ururka dhallinyarada ee BARKHADLE oo kamid ah ururrada dhallinyarada ee sida gaarka ah u taageera xisbiga KULMIYE, masuuliyiinta xisbiga iyo xukuumadda katirsan ee degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Sallaxley kasoo jeeda, maayarka iyo ku-xigeenka caasimadda Hargeysa iyo xubno kamid ah kooxda xiddigaha Geeska, ayaa wacdaro la yaable ka dhigay maalinta labaad ololaha KULMIYE oo ku beegnayd shalay oo Arbaca ahayd.
Taageerayaasha xisbiga KULMIYE ee labadan degmo oo ay horboodayaan madaxda ururka dhallinyarada ee Barkhadle oo wata boqolaal gaadiid ah oo astaanta xisbiga KULMIYE si weyn loogu sharraxay, ayaa socdaal dheer kusoo maray jidadka waaweyn ee degmada Maxamuud Haybe, waxana shacabka ku dhaqan degmadaasi kusoo dhaweeyeen sawaxan iyo sacabbo furan.
Intaas kadib ururka dhallinyarada oo ay wehelinayaan maayarka Caasimadda, ku-xigeenkiisa, xildhibaanno kale oo golaha deegaanka kamid ah, wasiir Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse, guddoomiyaha golaha dhexe ee KULMIYE md. Jaamac Ismaaciil Cige Shabeel iyo xubno kamid ah fannaaniita xiddigaha Geeska, ayaa socdaal dheer ku tegay degmada Sallaxley ee gobolka Mareedijeex, waxana halkaas kusoo dhaweeyey taageerayaal tiro badan oo uu xisbiga KULMIYE halkaas ku leeyahay.
Xubnahan masuuliyiinta ah iyo madaxda ururka dhallinyarada ee Barkhadle, ayaa goob fagaare ah kala hadlay shacabka degmada Sallaxley, waxana heeso ka hadlay qiimaha xisbiga KULMIYE iyo sida ay bulshadu diyaarka ugu tahay inay mar labaad u codayso ku maaweeliyey fannaaniinta xiddigaha Geeska.
Bulshada reer Sallaxley, ayaa u riyaaqday taageerada ay xisbiga KULMIYE u hayaan, iyaga oo dhegaha u raariciyey midhaha iyo mucda heesaha guubaabada ah ee fanniintu ku guubaabinayeen.